Jumlo RGB Gamer Desk oo leh moodal kontorool fog oo ZA soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |Laba-qarxin
Cabirka Alaabta:120 x60x 75cm;22 Kiiloogaraam
Qalab:Walxaha Walxaha, Birta, Caaga
Miisaanka Shayga:22 kg
• Dusha sare ee ciyaarta: cabbirka guud waa 120*60*75cm(47.5*23.8*29.6 inch).Dusha sare ee kaarboonka fiber-ka la dahaadhay, desktop-ka waa mid aan biyuhu helin, xoqin, u adkaysta kulaylka oo leh muuqaal fiican.Mashruucu waa dheer yahay oo ballaadhkiisu waa ku filan yahay 2 kormeerayaal iyo ciyaaro kale oo badan, shaqo ama walxo waxbarasho.
Iftiinka RGB ee firfircoon: miiska ciyaaraha wuxuu bixiyaa naqshad ergonomic ah iyo baaxad deeqsinimo leh oo leh saamaynta iftiinka RGB ee dhalaalaya si loo horumariyo khibradaada ciyaaraha.Iyada oo leh 17 furaha kontoroolka fogaanta ee qaababka iftiinka badan: 6 midab, 6 midab beddela, isbeddel iftiin RGB ah iyo iftiin toos ah.
• Dhisme Z-frame ah oo xasiloon oo u adkaysta: miiska ciyaaraha waxa uu ka samaysan yahay lugo jir bir ah oo tayo sare leh, waxana uu taageeri karaa miisaan sare oo ilaa 30 kg ah.Miiska qaro weyn (18mm) iyo jir bir u qaabaysan ayaa xaqiijiya adkeysiga iyo xoogga.Cagaha siman ayaa miiska ka dhiga mid xasiloon, ha ahaado rooga ama alwaax adag.
• Astaamaha ciyaartoyda: miiska ciyaartoygu waxa uu leeyahay kontorool fog, haye cabitaan, xadhig dhegaha lagu xidho, 2 dalool oo fiilada hagaya iyo xidhe godadku waxa uu ilaaliyaa si habsami ah u habaysan.Ma aha oo kaliya miiska ciyaaraha, laakiin sidoo kale waa goob shaqo oo badan.
• Isku imaatinka la fududeeyay: Si kulanka miiskan ciyaarta adag looga dhigo mid fudud sida ugu macquulsan, waxaanu ku soo darnay tilmaamo cad oo faahfaahsan (Luqadda Ingiriisiga lama dammaanad qaaday), qaybo lambaraysan iyo dhammaan agabka lagama maarmaanka ah.
Laydhka indhaha ee RGB ee la xakamayn karo
LOOGU NAQEEYAY CIYAARAHA: Gudida miiska ciyaaraha ee TwoBlow waxay ku qalabaysan yihiin nalalka fiberglass RGB LED waxayna abuuraan jawi ciyaar oo cajiib ah.Walxaha tayada sare leh: Qalabka asaasiga ah ee indhaha, oo lagu daboolay caag farsamo oo hufan oo hufan oo hufan, kaas oo hubin kara in muddo dheer aysan jirin dhibaatooyin tayo leh sida jajabinta iyo qallafsanaanta.Ikhtiyaarada hababka nalka ee badan: Iyadoo 17 furaha kontoroolka fogfog: 6 hal midab, 6 midab shakhsi oo beddelaya, isbeddelka iftiinka RGB iyo iftiinka toosan.Tayada joogtada ah: Iyada oo leh dusha fiber carbon iyo iftiinka RGB LED si loo muujiyo aqoonsiga ciyaartoygaaga, TwoBlow waa heerka koowaad ee gudaha iyo dibaddaba.Waxaad si fudud ugu beddeli kartaa saameyno badan oo iftiin leh adiga oo isticmaalaya kontaroolaha khibrad ciyaar oo wanaagsan.
Haysta taleefoonka dhegaha
Naqshad feker leh, u isticmaal booska si habboon oo diyaar u ah inuu ciyaaro wakhti kasta.
Cabbitaannada adag wuxuu bixiyaa boos cabitaan.U fiirso ciyaarta oo ha ka welwelin daadinta biyaha.
Nidaamka maaraynta fiilooyinka isku dhafan
Adigoo siinaya meel bannaan oo godkaaga ku jira qaabka maamulka, miiska kombayuutarka ciyaaraha ee ESGAMING wuxuu meesha ka saarayaa halista godadka bannaan ee dhulka.
Cagaha la hagaajin karo
Miiska ciyaaraha ee ESGAMING waxa uu leeyahay afar cagood oo dherer ah oo la hagaajin karo oo dejin kara miiska kana hortagaya gariir.
dalool hagaha fiilada
Iyada oo leh 2 godad hagaha fiilada bidix iyo midig, oo ku habboon rakibidda fiilada.
Dusha sare ee fiber carbon
Naqshad fiber kaarboon ah oo ay dhiirigelisay baabuurta kursiga tartanka.Waxaan u maleyneynaa inay muujin karto aqoonsiga ciyaaryahankaaga.
17 kaantaroolka fog ee muhiimka ah
Miiska ciyaaraha wuxuu la socdaa nalka RGB LED iyo kontoroolka fog.Waxaad si fudud ugu beddeli kartaa saamaynta iftiinka badan adiga oo isticmaalaya kontaroolaha waayo-aragnimada ciyaaraha ee wanaagsan.
Awoodda ugu badan
Lugaha adag iyo kuwa deggan waxay qaadi karaan ilaa 100 kg culeyska culeyska
Hore: Shaxda ciyaaraha ee leh Lugaha Qaabka Z Model FM-Z
Xiga: 140cm miisaska ciyaarta leh lugaha T shpe iyo suufka mouse Model LY 140cm
R qaabka lugaha aluminium miiska ciyaaraha model FM-JX-R